Ake sifunde nge-Tween 80 (eyaziwa nangokuthi i-Tween 80 noma i-polysorbate 80) ne-Tween 20 (eyaziwa nangokuthi yi-Tween 20) ngezindlela ezintathu ezihlukene
1 synthesis of Tween 80 is on the polymerization of desaturated sorbitol monooleate and ethylene oxide. I-synthesis ye-Tween 20: ingxube ye-polyethylene glycol nengxenye ye-polyethylene glycol. Phakathi kuka-80 uhlobo oluthile lwe-polyol nonionic surfactant, evame ukusetshenziswa nge-polysorbate. Isetshenziswa kabanzi kumalungiselelo oketshezi, aqinile futhi aqinile, njenge-emulsifier ye-O / W, i-solubilizer, i-wetting agent, i-dispersant ne-stabilizer.
2. Ukusetshenziswa kwaphakathi kwama-20: ukufinyela kwe-disc ne-ethylene oxide, ngoba ama-molecule ayo anamaqembu amaningi we-hydrophilic polyoxyethylene, ngakho-ke ine-hydrophilicity eqinile, njenge-detergent engeyona i-ionic. Imvamisa isetshenziswa njenge-O / W emulsifier, ingasetshenziswa ngokuhlangana ne-alkyl sulfate eyishumi nambili noma uhlobo lwe-emulsifier yokuthuthukisa ukuzinza kwe-emulsion. Ingasetshenziswa futhi njenge-solubilizer yezinye izidakamizwa. Umlingiswa we-Tween 80: inani le-peroxide le-Tween 80 alikho ngaphezu kwe-10, okuphuzi okukhanyayo kuya kuketshezi lwe-viscous orange; inuka kancane. Ukunambitheka okuncane okubabayo, kukhona umuzwa ofudumele. Iyancibilika emanzini, i-ethanol, i-methanol noma i-ethyl acetate, kepha incibilika emafutheni amaminerali.